सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामबाट निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन
संघीय सांसद, नेकपा
२०७६ भदौ ७ शनिबार १६:२६:००
समानुपातिक प्रणालीमार्फत सङ्घीय संसद्मा बागलुङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मना केसी जुझारु र सशक्त महिला नेतृ हुन । अखिल नेपाल महिला सङ्घकी स्थायी समिति सदस्य केसी नेकपा बागलुङको सह इन्चार्जको जिम्मेवारी भर्खरै सम्हालेकी छन् । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सदस्यसमेत रहेकी केसी असाध्यै कठिन परिस्थितिमा समेत देश र जनताको पक्षमा नेपाली राजनीतिमा सक्रिय छन् । उनै केसीसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, सरकारका कामकारबाही र महिला सशक्तीकरणका सवालमा गरेको कुराकानी :
कसरी चल्दै छ दैनिकी ? अहिले के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
राजनीतिकर्मीको दैनिकी आम जनतालाई भेट्ने दुःखसुख साट्ने नै हो । यसबाहेक सङ्घीय संसद्को सदस्य भएकाले यति वेला हामी अलि बढी व्यस्त छौँ । संसद्मा विधेयक हरू आइरहेका छन् यसमाथि छलफल गर्ने र पास गर्ने क्रम चलिरहेको छ यसैमा सक्रिय रूपमा आफूलाई सहभागी गराएकी छु । भर्खर मात्रै हामीले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी विधेयक ,कृषि सम्बन्धी विधेयक,उद्योग, खेलकुद, सम्बन्धी विधेयकहरूमाथि छलफल गर्न र पास गर्ने काम भएको छ । यसबाहेक दैनिक जनताले भोग्ने समस्याहरूको हल हामी मार्फत होस भन्ने आम जनताको अपेक्षा हुन्छ । सम्भव भएसम्म स्थानीय तहसम्मै पुगेर यस्तो समस्याबारे हामी जानकारी लिन्छौँ । हामी पुग्न नसकेको अवस्थामा पनि हामीलाई त्यहाँका स्थानीय जनताले फोनमार्फत जानकारी गराउनुहुन्छ । त्यसलाई नियमक निकायहरूमा पुग्ने र तिनको सम्बोधन गराउने काममा लागिरहेकी हुन्छु ।
अहिलेसम्म कति वटा विधेयकहरू पास भए र यसमा तपाईँको भूमिका कस्तो र-हो ?
हामीले पहिलो वर्ष १७ वटा मौलिक हक अन्र्तगतका १ सय ६६ वटा भन्दा बढी विधेयक हरू पास गरायौ । तपाईँले मेरो भूमिकाको कुरा गर्नुभयो त्यसमा मैले के कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ भने म आफू शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भएको कारणले गर्दा मेरो भूमिका यी विधेयकमा बढी केन्द्रित रहने भइहाल्यो । यसमा हामीले विशेष गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा अलि बढी समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो । जुन आम जनताको बढी सरोकारको विषय पनि भयो । यसका हरेक बुँदाहरूमा हामीले व्यापक छलफल गरेर पूर्णतामा पु¥याउने कुरामा एउटा सदस्यको जस्तो भूमिका हुनुपर्ने थियो त्यसमा मेरो पूर्ण सिर्जनात्मक र सशक्त भूमिका र¥हो ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक असाध्यै विवादमा पनि प-यो , जस्तै डा. गोविन्द केसी त यसका विरुद्ध अनसन नै बस्नुभयो यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ ?
खासमा तपाईँले पनि के बुझ्दिनुपर्छ भने शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता विषय आम सरोकारका अत्यन्तै संवेदनशील विषय हुन । शिक्षा स्वास्थ्य समितिको सदस्यको रूपमा आम दुरदराजका दुःखी गरिब जनताका छोराछोरीहरू कसरी स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँचमा पुग्न सक्छन् भन्नेमा मेरो चिन्ता थियो । त्यसमा पनि डाक्टर बन्ने कुरा अझै बढी चासो र चिन्ताको विषय स्वाभाविक रूपमा थियो । यसलाई आम जनताको पहुँच पु¥याउने सन्द्धर्भमा म मात्रै होइन यो सरकार पनि उत्तिकै संवेदनशील र जिम्मेवार छ भन्ने लाग्छ । तपाईँले डा. गोविन्द केसीको अनसनको कुरा गर्नुभयो यसमा मेरो खास भन्नु छैन । एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकमा उहाँले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुहुन्छ । उहाँले केही माग अघि सारेर धेरै पटक अनशन बस्नुभयो । यो आवस्याक थियो वा थिएन भन्ने विषयमा मैले अहिले चर्चा गर्नुपर्ने देख्दिन । हामीले समितिमा रहेर जे काम गरेका छौ यो आम जनताका पक्षमा गरेका छौ ।
चिकित्सा शिक्षा जनताको पक्षमा छ भन्नुभयो, फेरि गोविन्द केसी अनसनमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको हो ?
मैले अगाडी उल्लेख गरिसके उहाँ अनशन बस्ने र आफूलाई लागेको कुरा भन्ने अधिकार उहाँसँग छ । यस कारण फेरि अनसन बस्ने वा नबस्ने विषयमा मैले केही भन्नुपर्ने देख्दिन । तर मैले के कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने यो बिधययक पूर्णता आम जनताको पक्षमा छ । अवश्य पनि उहाँको माग यसले सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ ।
अहिले तपाइकै पार्टीको दुई तिहाइसहितको सरकार छ । तपाईँ सरकारका कामलाई कसरी मुल्यांङकन गर्नुभएको छ ?
स्वाभाविक रूपमा आम जनताको अपेक्षा अहिलेको सरकारमा असाध्यै बढी छ । ठ्याक्कै त्यो अपेक्षा अहिले नै पुरा हुने अवस्था पक्कै होइन तर सरकारले यो बिचमा जे काम गरेको छ यसले पक्कै पनि जनताको तमाम अपेक्षा पूर्ण गर्ने आधार तयार पारेको छ । यस कारण सरकारका अहिलेका कामबाट म खुसी छु । यसको अर्थ यही नै पूर्ण हो भनेर बुझ्नु हुँदैन । बाँकी समयमा सरकारले अझै राम्रो गर्ने विश्वास छ मलाई ।
तपाईँ खुसी छु भन्दै गर्दा आम जनताले त सरकारप्रति चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् नि ?
हो मैले अगाडी पनि भनिसकेकी छु । जनताको अपेक्षा यो सरकारप्रति असाध्यै बढी छ । त्यो स्पिडमा काम नहुँदा स्वाभाविक रूपमा जनतामा पैदा हुने निराशा, असन्तुष्टि नै हो । तर किन अहिले नै सरकारप्रति असुन्तुष्टि नआओस भन्ने लाग्छ मलाई भने । सरकारले अहिले दीर्घाकालीन योजनासहितका कार्यक्रम अघि सारेको छ । जसको आधार तयार पार्ने काम अहिले भइसक्यो यी कामले पूर्णता पाउन्न बाँकी छ । यी काम पूर्ण नभएसम्म नदेखिएको अवस्था मात्रै हो, काम नभएको अवस्था होइन ।
पार्टीभित्रबाट पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ नि ?
हो पार्टीभित्रबाट पनि सरकारका कामकारबाहीबारे बेला बेला प्रश्न उठेको अवश्य हो । तर यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ की पार्टी भित्र र बाहिर जे भनेपनि आम नेपाली जनता हामी एउटै समाजका उपज हौँ । समाजको यही परिवेश, वातावरण ,शिक्षा ,हावापानी,धार्मिक ,सांस्कृतिक रहनसहनबाटै हाम्रा बुझाई र गतिविधि निर्देशित हुन्छन् । हामीले उल्लेख गरिसकेका छौ की सरकारले अहिले गरेको काम सबैले अपेक्षा गरेअनुसार नै भएका छन् भन्ने अवस्था होइन । यस कारण जनअपेक्षाअनुसार काम हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । मैले पार्टी भित्रैबाट पनि बेला बेला सरकारका कामकारबाही बारे जेजस्ता प्रश्नहरू उब्जिने गरेका छन् यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने गरेकी छु । जसले सरकारका कामकारबाहीलाई झन् छरितो व्यवस्थित, पारदर्शी र चुस्त राख्ने काम गर्दछ ।
तपाईँले तपाईँको क्षेत्रमा के के काम गर्नुभयो ? कस्तो छ तपाईँको मतदाताको प्रतिक्रिया ?
बागलुङमा दुईवटा क्षेत्र छन् । म समानुपातिक प्रणालीबाट सङ्घीय संसद्मा आएकी हुँ । मेरो जिल्लाको हकमा ससाना विकास निमार्णको सवालमा होस वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउने सवालमा मैले सक्दो पहल गरेकी छु । बाल्लुङको मात्रै नभएर समग्र देशको समृद्धिमा भूमिका खेल्न सक्ने कालिगण्डकि कोरिडोर सँगै स्थानीय पर्यटन क्षेत्र, खेलकुद, शिक्षा,स्वास्थ्य, खानेपानि ,सिँचाइ लगायतको विकासको काम भई रहेका छन् । अहिले स्थानीय सरकारमार्फत नै धेरै काम हुन्छन् यद्यपि केन्द्रबाट हुने बजेट विनियोजनदेखि अन्य काममा मैले पुलको काम गरेकी छु । अहिले बागलुङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै माननीय ज्युहरूसँग सो क्षेत्रको विकासका सवालमा निरन्तर छलफल र कुराकानी हुने गरेको छ । र मैलै एक्लै गर्ने मात्रै होइन अरू माननीय ज्यूलाई सँगै लिएर गर्ने काममा समेत मैले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गरेकी छु । जहाँसम्म मतदाताहरूको कुरा यहाँले गर्नुभयो मैले माथि पनि भने स्वाभाविक रूपमा आमजनताको जुन तीव्र विकासको अपेक्षा सरकारमाथि छ त्यो हामीसँग पनि उस्तै हुन्छ । म समय मिलाएर नियमित बागलुङ जाने र आम मतदाताको राय लिने काम गरेकी छु । उहाँहरूको सहभागिता उत्साहप्रद छ । म खुसी छु आम मतदाता मेरो जिल्लावासीहरूको माया सद्भाव र विश्वासबाट जुन झन् पछि झन् बढेको महसुस गरेकी छु ।
तपाईँ अखिल नेपाल महिला सघंको स्थायी कमिटी सदस्य जुझारु एवं कुशल महिला नेतृको रूपमा आम महिला सशक्तीकरणको सवालमा तपाईँले के गर्नुभयो ?
महिलाहरूको क्षेत्रमा भन्नु पर्दा ,अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू एउटा वडाबाट २ जना महिला १जना दलित महिला सदस्य निर्वाचित भएर आउनुभएको छ । उहाँहरू दैनिक रूपमा आइपर्ने समस्याहरूमा खट्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी सुसूचित गरिरहेका छौ । सहकारीको माध्यमबाट होस वा राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रम होस वा अन्य कार्यक्रमहरू मार्फत पनि आम महिलाहरूलाई जोडेर महिला सशक्तीकरणका काममा जोडिरहेका छौ । हामी त सङ्घीय सांसदका सदस्य देशको नीति बनाउनै बढी केन्द्रित हुन्छौ यो सवालमा महिला हकहितका सवालमा आवस्याक काम गरिरहेका छौ । म सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी विधेयक निर्माण गर्ने शिक्षा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमा पनि थिए । हामीले त्यो अन्र्तगत रहेर देशभरि स्वास्थ्य सेवामा लामो समयदेखि काम गर्नुभएका स्वास्थ्य स्वंमसेविकाहरुलाइ राष्ट्रिय समितिमै समावेश गर्ने ,उहाँहरूको पारिश्रमिक तोक्ने, प्रजनन स्वास्थ्य सँग सम्बन्धित महिलाहरूको हकमा उनीहरूको हित हुने खालको कानुन बनाउने लगायत महिलाहरूलाई समान न्यायका लागी के गर्दा सहज हुन सक्छ भन्ने विषयमा काम गदैछौं ।
अहिले कतिको सहज छ महिलाको लागि राजनीतिक नेतृत्व सम्हाल्न ?
हिजो सती प्रथा देखि शीतल निवास सम्म महिलाको कुरा छ । सभामुख, राष्ट्रपति, प्रधान्यायधीससम्म पनि महिलाहरू आइपुग्नुभयो । मैले भन्ने भन्दा बढी यी दृष्टान्तले स्पष्ट हुन्छ । पक्कै पनि सहज छैन । निक्कै चुनौतीहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय केही सहज भएको कुरा छिपाउनुहुँदैन । संविधानमा ३३ प्रतिशत महिलाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ जसले महिलाहरूलाई केही खुकुलो अवश्य बनाएको छ ।